Oovimba be-UNISWAP-Funda ukurhweba
Uniswap Ugqitha i-LINK njengowona Mqondiso Ubanjwe yi-Ethereum Whales
Ukungatshintshi (UNI) iye yaba yi-asethi ethengiswa kakhulu phakathi kwe-Ethereum whales, eyaziwa ngokuba yi-1,000 yeedilesi ezinkulu kwinethiwekhi, ibetha i-Chainlink ngaphandle kwendawo. Ngokweqonga lohlalutyo iWhaleStats, enye yezipaji zomnenga ibamba ngaphezulu kwe-100 yezigidi zeedola ze-UNI.
Ngaphandle koku, i-UNI ihlala iyeyona nto ibambekayo kwimarike, njengoko phantse yonke i-wallet enkulu ibamba ithokheni enye ye-Uniswap.
Iingxelo zibonisa ukuba isizathu soku kwanda kokuthandwa kwe-UNI phakathi kwe-whale wallets kungenxa yendalo ye-asethi njengento eluncedo kwi-Uniswap yotshintshiselwano. Ukusebenzisa inethiwekhi, abasebenzisi kufuneka bachithe amathokheni abo e-UNI emva kokuthenga nge-Ether.
U-Uniswap okhuphisana naye ophambili, i-LINK, nayo ithatha inani elibalulekileyo le-Ethereum whale wallets, kunye needilesi ezinkulu eziphethe i-$ 250 yezigidi. Ngelixa ezi zixhobo ze-crypto-assets zihlala ziphezulu zokubamba imikhomo, azikafiki kwinqanaba le-1.1 yezigidigidi zeepaji ezisanda kufikelela kwiShiba Inu.
Okwangoku, abahlalutyi baye babiza i-UNI ye-SHIB yokuqala ye-2021, njengoko uphawu lufumene ngaphezu kwe-1,100% phakathi kukaJanuwari no-Aprili 2021. Nangona kunjalo, uphawu luye lwalahlekelwa ngaphezu kwe-60% ukususela ngoko, emva kweziganeko ezininzi ze-bearish kwishishini le-crypto kunye nokwanda kokhuphiswano kwi-crypto. Indawo ye-DeFi.
Amanqanaba angundoqo e-Uniswap aza kuBukelwa — nge-31 kaDisemba
I-UNI yakutshanje ihlupheke kakhulu -16% ukulungiswa ukusuka kwi-20.00 yengingqi ukuya kwi-16.75 inkxaso ye-$ 21.50 phakathi koMvulo noLwesine, phakathi kokuvela kwakhona kweebhere kwimarike ebanzi. Ngaphandle kokuphazamiseka kwamva nje, i-cryptocurrency igcina imbonakalo ye-bullish kwitshathi yam yemihla ngemihla kwaye ihlala isendleleni ukuya kwi-XNUMX yeedola.
I-UNIUSD -Itshathi yemihla ngemihla kwiCoinbase. Umthombo: TradingView
Oko kuthethiweyo, ndilindele ukubona ukuchacha okuthe gqolo ukuya kumanqaku angama-20.00 wokuchasa ngokwasengqondweni kwezi ntsuku zizayo. Nangona kunjalo, oku kubuyiselwa kungathatha ixesha, ngenxa yembalela ekhoyo ngoku kwiimarike njengoko singena kunyaka omtsha.
Okwangoku, amanqanaba am okumelana ne-$ 18.25, i-$ 19.20, kunye ne-$ 20.00, kwaye amanqanaba am enkxaso yi-$ 16.75, i-$ 15.00 kunye ne-$ 14.00.
Imali engatshintshiswanga yentengiso: $ 11.2 billion
Ukungalawulwa kwamandla: 0.50%
Inqanaba lentengiso: #18
tags Cryptocurrency, iindaba, Uhlalutyo lobuchwephesha, I-UNI, UNISWAP
Iimfazwe ze-Uniswap kunye noxinzelelo lwe-Bearish phakathi koHlaziyo lweNethiwekhi ye-Auto Router yakutsha nje
Ukuhlaziywa: 20 Disemba 2021
I-Uniswap Labs (UNI)-abaphuhlisi abasemva kwe-Uniswap, i-DeFi enkulu yotshintshiselwano-kutsha nje ikhuphe amanqaku amaninzi abalulekileyo ukunyusa amaxabiso kunye nokwandisa iindleko zegesi zokutshintshana.
Inkampani ikhuphe ingxelo ehlaziyiweyo "I-Auto Router" okonyusa amaxabiso orhwebo kakhulu ngokuhambisa urhwebo kuzo zombini Uniswap v2 kunye v3 pools. Ngeli nqaku, abasebenzisi banokulandela iindleko zokwenyani zokutshintsha ngexesha lokwenyani kujongano lwe-App. Ngaphandle kokuphucula amaxabiso okutshintsha, uhlaziyo olutsha lukwajonga amaxabiso angcono kuzo zonke iiprothokholi ze-UNI zabasebenzisi.
Ngeli xesha, uhlaziyo lweza nelinye inqaku elibonisa i-Optimistic Ethereum kunye neArbitrum. Uphuculo lwaphunyezwa ukubonelela ngamava okurhweba angabizi kakhulu kubasebenzisi, ngoncedo lwamaxabiso orhwebo asebenzayo kunye neendleko eziphantsi zoNqanaba lwesi-2 womnatha.
Ukongeza, i-Uniswap App iza noqikelelo lwe-USD lomrhumo werhasi ngaphambi kokuba ingenise utshintsho ukuze yamkelwe. Ngokusetyenziswa koqikelelo lwerhasi, i-app iyakuseta ngokuzenzekelayo ukutyibilika ngokusekwe kwindleko yerhasi elindelekileyo yomthengisi kunye nobukhulu borhwebo.
Nangona iiplatifomu ezininzi ezintsha ziye zavela kwindawo ye-DeFi, i-UNI iyaqhubeka nokukhusela isikhundla sayo njengenkokeli yemarike ye-DEX. Ngokwengxelo yomnikezeli wohlalutyo i-Dune Analytics, i-Uniswap ilawula imarike ye-DEX nge-78%. Umntu okhuphisana naye ngokukhawuleza, i-SuhiSwap, ilawula kuphela i-8% yemarike.
Amanqanaba angundoqo e-Uniswap aza kuBukelwa — nge-20 kaDisemba
I-UNI iyaqhubeka nokuzabalaza ngoxinzelelo olungapheliyo lwe-bearish njengoko i-cryptocurrency iwela ngaphantsi kwe-$ 15.00 uphawu, ilandela ukuphindaphinda okungaphumelelanga ukusuka kwisiseko se-$ 13.75. Ngexesha lokushicilela, i-cryptocurrency yamashumi amabini inkulu iphantsi kwempembelelo ye-bearish ehlaziyiweyo, njengoko iphinda imiphanda ijonge kwi-13.75 yeedola.
Oko kwathiwa, ukuvavanywa kwakhona kwezi nyanga ezininzi ziphantsi kwixesha elisondeleyo kunokwenza okanye ukwaphule imali ye-crypto njengoko unyaka omtsha usondela. Njengoko kubonisiwe kwitshathi yemihla ngemihla, ukukhuseleka okuphumelelayo kwesiseko se-$ 13.75 kunokutshisa i-rebound yemarike elinde ixesha elide kwaye iqhube amaxabiso kwi-$ 21.00s. Nangona kunjalo, ukungaphumeleli ukuthintela amabhere ukuba angahambi ngaphantsi kwenkxaso ebalulekileyo inokutshisa amadangatye e-bearish kwaye aqhube amaxabiso kwi-$ 10.00 ephantsi.
Okwangoku, amanqanaba am okumelana ne-$ 15.00, i-$ 16.00, kunye ne-$ 16.75, kwaye amanqanaba am enkxaso yi-$ 13.75, i-$ 13.00 kunye ne-$ 12.00.
Imali engatshintshiswanga yentengiso: $ 8.95 billion
Ukungalawulwa kwamandla: 0.41%
Inqanaba lentengiso: #20
Ixabiso le-Uniswap (UNIUSD) liDangling Ngaphakathi kwe-$ 22 kunye ne-$ 19 yeNqanaba
Uhlalutyo lwexabiso le-Uniswap – nge-25 kaNovemba
Kwimeko yokunyuka koxinzelelo lweebhere, ixabiso linokunyanzeliswa ukuba liphule inqanaba lenkxaso ye-$ 19, ixabiso liya kuboniswa kwi-$ 14 kunye ne-$ 12 amanqanaba. Ukuqhawuka kwinqanaba lokumelana ne-$ 22 liya kwandisa ixabiso kwi-$ 24 kunye namanqanaba e-$ 27.
Amanqanaba okumelana: $ 22, $ 24, $ 27
Amanqanaba enkxaso: $ 19, $ 14, $ 12
I-UNI / i-USD yexesha elide iTrendish: Ukuthwala
I-Uniswap ikwintshukumo ye-bearish kwimbono yexesha elide. I-cryptocurrency yaqhambuka kwintshukumo ejikelezayo ngaphakathi kweedola ezingama-27 kunye namanqanaba e-24 yeedola kwiiveki ezimbini ezidlulileyo ngoNovemba 16. Ikhandlela elinamandla le-bearish yemihla ngemihla lenziwe ukuba lingene kwinqanaba lenkxaso ye-$ 24 kunye nexabiso livavanya inqanaba lenkxaso ye-19 yeedola. Inqanaba elikhankanyiweyo libambe kwaye ixabiso lidibanisa ngaphakathi kwe-$ 22 kunye ne-$ 19 amanqanaba kwiveki ephelileyo.
Itshathi yosuku lwe-UNIUSD, ngoNovemba 25
Isimboli se-bearish sele simiselwe njengamaxesha angama-9 i-EMA ingaphantsi kwamaxesha angama-21 e-EMA. Uniswap uye wawela ii-EMA ezimbini ezantsi, Ixabiso lithengisa ngaphantsi kwee-EMA ezimbini. Kwimeko yokunyuka koxinzelelo lweebhere, ixabiso linokunyanzeliswa ukuba liphule inqanaba lenkxaso ye-$ 19, ixabiso liya kuboniswa kwi-$ 14 kunye ne-$ 12 amanqanaba. Ukuqhawuka kwinqanaba lokumelana ne-$ 22 liya kwandisa ixabiso kwi-$ 24 kunye namanqanaba e-$ 27. Isalathiso samandla ahambelanayo sikumanqanaba angama-40 abonisa ukuba akukho mkhombandlela uthile.
Uniswap isukela kwitshathi yeeyure ezi-4. Isantya seebhere siyancipha kwaye inqanaba lenkxaso ye-19 yeedola alikwazanga ukuchithwa ngexabiso. Uxinzelelo lwabathengi alunamandla ngokwaneleyo ukuphula inqanaba lokumelana ne-22 yeedola. Ixabiso le-Uniswap lijinga ngaphakathi kwinqanaba lokumelana ne-$ 22 kunye nenqanaba lenkxaso ye-$ 19. Ukunyakaza okujikelezayo kuyaqhubeka de kubekho ukuqhawuka.
I-UNIUSD itshathi yeeyure ezi-4, ngoNovemba 25
I-Uniswap iyarhweba ngapha nangapha kwamaxesha angama-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA, ixesha lesalathiso samandla esinxulumene ne-14 likumanqanaba angama-40 edola abonisa ulwalathiso lwe-bearish.
tags Marketing, Uhlalutyo Technical, UNISWAP
I-Uniswap (UNIUSD) Ixabiso: Ngaba i-Rangeing Movement ngaphakathi kwe-$ 27 kunye ne-$ 21 yamanqanaba aqhubekayo?
Uhlalutyo lwamaxabiso olungatshintshiswanga-Okthobha 28
Xa kukho ukuhlukana kwinqanaba lokumelana ne-$ 27, ixabiso linganyuka ukuya kwi-$ 30 kunye ne-$ 37 amanqanaba okumelana. Kwimeko apho iinkunzi zeenkomo azikwazanga ukuphula inqanaba lokumelana ne-$ 27, ukuqhubeka kwe-market market kunokwenzeka okanye kuya kubakho i-bearish breakout kumanqanaba okuxhasa i-$ 21 enokunciphisa i-$ 17 kunye ne-$ 14.
Uniswap usukela kwimbonakalo yexesha elide. Inqanaba lokuchasana le-27 yeedola likhuselwe yinkunzi kwiveki ephelileyo, ngokunjalo, inqanaba lenkxaso ye-21 yeedola kunye noxinzelelo lweebhere alikwazanga ukumelana nalo. Ingqekembe ithengisa ngaphakathi kwinqanaba le-$ 27 yokumelana nenqanaba kunye nenqanaba lenkxaso ye-$ 21. Kude kuqhawuke ixabiso ukuya emazantsi okanye emantla intshukumo esukelayo ingaqhubeka. Nangona kunjalo, uxinzelelo lweebhere luyanda kwaye kukho ukuthambekela kwe-bearish breakout kwinqanaba lenkxaso ye-$ 21.
Itshathi yemihla ngemihla ye-UNIUSD, nge-Okthobha 28
Okwangoku, i-Uniswap ithengisa ngaphantsi kwexesha le-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA abonisa ukunyakaza kwe-bearish. Umyinge ohamba ngokukhawuleza (amaxesha ali-9 EMA) uzama ukuwela umyinge ohamba kancinci (amaxesha angama-21 EMA). Xa kukho ukuhlukana kwinqanaba lokumelana ne-$ 27, ixabiso linganyuka ukuya kwi-$ 30 kunye ne-$ 37 amanqanaba okumelana. Kwimeko apho iinkunzi zeenkomo azikwazanga ukuphula inqanaba lokumelana ne-$ 27, ukuqhubeka kwe-market market kunokwenzeka okanye kuya kubakho i-bearish breakout kumanqanaba okuxhasa i-$ 21 enokunciphisa i-$ 17 kunye ne-$ 14.
Uniswap isukela kwitshathi yeeyure ezi-4. I-Coin yanyuka ukusuka kwinqanaba lenkxaso ye-17 yeedola kunye nokwakhiwa kwekhandlela elinamandla. Oku kubangele ukunyuka kwexabiso, inqanaba lokumelana ne-$ 21 laphulwa phezulu kwaye livavanya izinga lokumelana ne-$ 27. Inqanaba elisele likhankanyiwe libambe kwaye iinkunzi bezingenako ukungena lula. Idityaniswe nesantya esisezantsi se-bearish, ixabiso lisombulula kwintshukumo yoluhlu.
Uniswap itshathi yeeyure ezi-4, nge-28 kaOkthobha
U-Uniswap uthengisa ngaphantsi kwexesha le-9 le-EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA emva kokuwela ezimbini ezisezantsi ngaphakathi koluhlu. Ixesha lesalathiso samandla anxulumeneyo 14 likumanqanaba angama-30 ukugoba ukubonisa uphawu lokuthengisa.
Ukungaguquguquki (i-UNIUSD) amaxabiso anokuqhekeza inqanaba lama- $ 26 ukuya kuthi ga kwinqanaba lokumelana ne- $ 30
Ukuhlaziywa: 7 October 2021
Uhlalutyo lwamaxabiso olungatshintshiswanga-Okthobha 07
Ukwahlukana kwenqanaba lamaxabiso angama- $ 26 kunokunyusa amaxabiso ukuya kuthi ga kwi-30 kunye nakwi-37 yamanqanaba oxhathiso. Ukusilela ukophula inqanaba lokumelana ne- $ 26 ziinkunzi kungakhokelela ekuqhubekeni kweemarike ezahlukeneyo okanye ukubuyela umva kumanqanaba enkxaso kwi $ 21, $ 17 kunye ne- $ 14.
Ukungatshintshiswanga kukunyusa ixesha elide. Abathengi batyhale ngempumelelo Ungatshintshi kwinkcaso inqanaba leedola ezingama-26 kwiveki ephelileyo. Kwenziwe iinzame ezininzi zokwaphula inqanaba elikhankanyiweyo. Kubekho uqhekeko oluncinci kodwa amandla okonyusa amandla akakwazanga ukugcina intshukumo. Okwangoku, ixabiso lisokola ukuphelisa inqanaba lokumelana ne- $ 26 njengoko ikhandlela lemihla ngemihla livula intengiso namhlanje.
Itshathi yemihla ngemihla ye-UNIUSD, nge-Okthobha 07
Ukungatshintshiswanga kuthengiswa ngaphezulu kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA ebonisa ukunyakaza okunyukayo. Umndilili wokuhamba ngokukhawuleza (ama-9 amaxesha e-EMA) uwele umndilili wokuhamba kancinci (amaxesha angama-21 EMA). Ukwahlukana kwenqanaba lamaxabiso angama- $ 26 kunokunyusa amaxabiso ukuya kuthi ga kwi-30 kunye nakwi-37 yamanqanaba oxhathiso. Ukusilela ukophula inqanaba lokumelana ne- $ 26 ziinkunzi kungakhokelela ekuqhubekeni kweemarike ezahlukeneyo okanye ukubuyela umva kumanqanaba enkxaso kwi $ 21, $ 17 kunye ne- $ 14.
Ukungatshintshi kuxhomekeke kwitshathi yeeyure ezi-4. Kwakungabikho ntshukumo ibalulekileyo kwintengiso ye-Uniswap kwiveki ephelileyo. Ixabiso liyabuyela umva emva kokuqhekeka kwinqanaba lokumelana ne- $ 26 ngokwenziwa kwekhandlela le-bearish. Ingqekembe idibanisa kwinqanaba lamaxabiso angama- $ 26.
Itshathi yeeyure ezi-4 ze-UNIUSD, nge-Okthobha 07
Ukungatshintshi kuthengisa ngaphezulu kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA kufutshane, ixesha lesalathiso samandla esi-14 singaphezulu kwamanqanaba angama-50 agobileyo ukubonisa uphawu lokuthenga.
tags Marketing, Uhlalutyo lwezobuchwephesha, UNISWAP
Ukungaguquguquki (UNIUSD) Ixabiso: Ngaba inokuba yiPullback okanye ukubuyela kwiXabiso kwiXabiso lexabiso le- $ 17?
Ukuhlaziywa: 23 Septemba 2021
Uhlalutyo lwamaxabiso olungatshintshiswanga-Septemba 23
Ixabiso lingaqhubeka nokunyuka kwezinto ukuba alichaswanga ngamanqanaba okumelana namandla kwaye iya kujolisa kuma- $ 21, $ 26 kunye nama- $ 30 amanqanaba okumelana. Ukuba amanqanaba oxhathiso aguqukayo aphikisana nexabiso, imeko ye-bearish inokuqhubeka iye kumanqanaba enkxaso kwi-17, $ 14 nakwi-12 yeedola.
Amanqanaba okumelana: $ 21, $ 26, $ 30
Amanqanaba enkxaso: $ 17, $ 14, $ 12
Ukungatshintshiswanga kukungagungqi kwimbonakalo yexesha elide. I-crypto idlale ngendlela ebekuqikelelwe ngayo kwiveki ephelileyo; Iphethini yetshathi ephezulu kabini eyenziweyo kwaye ixabiso lehlile ukuvavanya inqanaba lenkxaso le- $ 17. Ixabiso libuyile izolo ukuphinda liphinde lihlawule inqanaba lamaxabiso angama-21. Namhlanje, kubonakala ngathi amaxabiso anokuqhubeka nokukhula aye kwinqanaba lokumelana ne- $ 21.
Itshathi yemihla ngemihla ye-UNIUSD, ngoSeptemba 23
Ukungatshintshiswanga kuthengiswa ngezantsi kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA okubonisa imeko ye-bearish. Umndilili wokuhamba ngokukhawuleza (ama-9 amaxesha e-EMA) uhlala ungaphantsi komndilili wokuhamba kancinci (amaxesha angama-21 EMA). Ixabiso lingaqhubeka nokunyuka kwezinto ukuba alichaswanga ngamanqanaba okumelana namandla kwaye iya kujolisa kuma- $ 21, $ 26 kunye nama- $ 30 amanqanaba okumelana. Ukuba amanqanaba oxhathiso aguqukayo aphikisana nexabiso, imeko ye-bearish inokuqhubeka iye kumanqanaba enkxaso kwi-17, $ 14 nakwi-12 yeedola.
Ukungatshintshiswanga kukunyusa itshathi yeeyure ezi-4. Inqanaba lenkxaso kwi-17 yeedola yafikelelwa ngoxinzelelo lweebhere kunye nenqanaba elikhankanyiweyo. Ixabiso liyehla emva kokulivavanya kwaye liyakhula kancinci ukuya kwinqanaba lokumelana ne- $ 26. IiBulls zinokufumana amandla ngakumbi kwaye zityhale ingqekembe kwicala elingasentla.
Itshathi yeeyure ezi-4 ze-UNIUSD, ngoSeptemba 23
Ungatshintshi Phantsi koPhando kwi-SEC: Imithombo engekho mthethweni kwi-WSJ
Ngokwengxelo evela kwiWall Street Journal, imithombo engekho semthethweni ibanga ukuba i-SEC ngoku ikhangela iiLebhu ezingasasebenziyo ze-DEX. Ngelixa i-SEC ingakhange ithethe nto malunga nophuhliso, isithethi seLebhu ezingatshintshiswanga sixelele iWSJ ukuba:
"[Ukungatshintshi] kuzibophelele ekuthobeleni imithetho nemimiselo elawula icandelo lethu kunye nokubonelela ngolwazi kubalawuli abaza kubanceda nakweyiphi na imibuzo."
Imithombo engekho mthethweni ixelele i-WSJ ukuba iqela lokunyanzeliswa kwe-SEC libuze ukuba i-Uniswap ithengiswa njani kwaye ifuna ulwazi malunga nezicelo zokubolekisa nge-crypto. Abanye oovimba abasondeleyo kulo mbandela baqaphele ukuba i-SEC ifuna ukuqinisekisa ukuba ngaba i-DEX okanye izicelo zokubolekisa “Ukuxhathisa ukubekwa esweni.”
Ukungaguquguquki ngoku kuLuhlu lweeNtengiso eziBalulekileyo kwiNdawo ye-DEX
Okwangoku, i-ecosystem ye-crypto ikwindawo yokuqala njenge-DEX enkulu esekwe kumthamo wentengiso. Isithuba se-DEX sithathe i-16 yezigidigidi zeedola kumthamo wale veki, nge-Uniswap accounting ye- $ 10.3 yezigidigidi zevolumu iyonke. Ngokwe-Dune Analytics, iiAkhawunti ezingatshintshiyo ezingama-65.1% yevolumu yokuthengisa ye-DEX namhlanje.
Inkqubo yophando ye-SEC iza emva kweeveki ezimbalwa emva kokuba isigebenga se-DEX sifumene ukugxekwa okukhulu ngokususa iithokheni ezili-100 kwindawo ephambili yomsebenzisi ekupheleni kukaJulayi.
Kukho amabango, ngelo xesha, ukuba iqonga labona iithokheni ezili-100 ekubhekisweni kuzo kungabhaliswanga ukhuseleko ngabalawuli baseMelika. I-DEX yaphawula emva apho ukuba: "Ezi thokheni zihlala zimela isixa esincinci kakhulu sevolumu iphela kwiProtocol engatshintshiyo."
Ibali elijikeleze iphenyo le-SEC kwesona sicelo sikhulu se-DEX sisakhulayo, kwaye ulwazi oluninzi olunokuthi luvele kwixesha elizayo.
tags iindaba, sec, UNISWAP
Uniswap (UNIUSD) Amaxabiso kuvavanyo lweNqanaba lokuBuyela umva
Ukuhlaziywa: 2 Septemba 2021
Uhlalutyo lwamaxabiso olungatshintshiswanga-Septemba 02
Xa iibhere zikhusela inqanaba lokumelana ne- $ 31, ixabiso linciphise ukuya kuthi ga kumanqanaba enkxaso ye- $ 22, $ 15 kunye ne- $ 12.
Amanqanaba okumelana: $ 31, $ 34, $ 39
Amanqanaba enkxaso: $ 22, $ 15, $ 12
Ukungatshintshiswanga kukunyusa ixesha elide. Iinkunzi zeenkomo zilawula imarike kungekudala emva kokuba inyathelo lentengo lenze iphethini yetshathi engezantsi kwinqanaba lokuxhasa le- $ 15. Ixabiso lifikelele kwinqanaba eliphezulu lama- $ 31 kwiveki ephelileyo. Ibuyela umva ukuphinda ibuye inqanaba lenkxaso eguqukayo kodwa kamva ibuyiselwe kwinqanaba lokunyusa kwaye ixabiso lavavanya inqanaba lokumelana ne- $ 31 okwesibini izolo. Namhlanje, iibhere zivula imarike, ixabiso lingahla.
Itshathi yemihla ngemihla ye-UNIUSD, ngoSeptemba 02
Ukungatshintshiswanga kuthengiswa ngaphezulu kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA ebonisa ukukhula ngamandla. Umndilili wokuhamba ngokukhawuleza (ama-9 amaxesha e-EMA) ungaphezulu komndilili wokuhamba kancinci (amaxesha angama-21 EMA). Xa iibhere zikhusela inqanaba lokumelana ne- $ 31, ixabiso linciphise ukuya kuthi ga kumanqanaba enkxaso ye- $ 22, $ 15 kunye ne- $ 12. Nangona kunjalo, i-Index ye-Relative Strength ikhomba kumanqanaba angama-31 abonisa ukuthengisa.
Ukungatshintshiswanga kukunyusa itshathi yeeyure ezi-4. Umfutho wokuqhubela phambili uyaqhubeka ukwanda ngokuzinzileyo emva kokusekwa kwepateni ephantsi yetshathi kwinqanaba lokuxhasa le- $ 15. Oku kwenza ukuba ixabiso lingene kwinqanaba lokumelana ne- $ 22. Inqanaba lokumelana ne- $ 31 lavavanywa ngo-Agasti 16, labuyela umva kwaye laphinda lafumana inqanaba elikhankanyiweyo namhlanje kwaye ngoku liyabuyela umva.
Itshathi yeeyure ezi-4 ze-UNIUSD, ngoSeptemba 02
Ukungatshintshiswanga kuthengiswa ngaphezulu kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA, ixesha lesalathiso samandla esi-14 sikumanqanaba angama-60 agobileyo ukubonisa uphawu lokuthengisa.
Ukungatshintshi (i-UNIUSD) Ixabiso linganciphisa ukuya kuthi ga kwi-22 yeNqanaba leNkxaso
Ukuhlaziywa: 26 Agasti 2021
Uhlalutyo lwamaxabiso olungatshintshiswanga-Agasti 26
Inqanaba lenkxaso leedola ezingama-25 linokungena ngaphakathi xa iibhere zifumana uxinzelelo ngakumbi kwaye ixabiso liza kwehla liye kuthi xhaxhe ngexabiso lama- $ 22 kunye ne- $ 14. Xa iinkunzi zeenkomo zonyusa umfutho wazo, inqanaba lokuchasana leedola ezingama-30 liza kwaphulwa kwaye inqanaba lokuchasana le- $ 34 kunye ne- $ 37 lingavavanywa.
Amanqanaba okumelana: $ 30, $ 34, $ 37
Amanqanaba enkxaso: $ 25, $ 22, $ 14
Ukungatshintshiswanga kukungagungqi kwimbonakalo yexesha elide. Inqanaba lokumelana ne-30 yeedola kufikelelwe kwiveki ephelileyo xa iinkunzi zenkomo zifumene uxinzelelo ngakumbi. Inqanaba elikhankanyiweyo lalikhuselwe ziibhere zidityaniswa namandla abuthathaka kwinqanaba elifanayo, ixabiso laqala ukwehla kwinqanaba lokuxhasa le- $ 25. Eli lixesha lesibini ixabiso liza kuvavanya inqanaba leedola ezingama-25, uxinzelelo ngakumbi oluvela kwiibhere lunokuluchitha.
Itshathi yemihla ngemihla ye-UNISWAP, Agasti 26
Ukungatshintshi kungena kwii-EMA ezimbini ezisezantsi. Ingqekembe ithengisa ngezantsi kwamaxesha ali-9 e-EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA nto leyo ebonisa amandla e-bearish. Inqanaba lenkxaso leedola ezingama-25 linokungena ngaphakathi xa iibhere zifumana uxinzelelo ngakumbi kwaye ixabiso liza kwehla liye kuthi xhaxhe ngexabiso lama- $ 22 kunye ne- $ 14. Xa iinkunzi zeenkomo zonyusa umfutho wazo, inqanaba lokuchasana leedola ezingama-30 liza kwaphulwa kwaye inqanaba lokuchasana le- $ 34 kunye ne- $ 37 lingavavanywa. Isalathiso samandla esihlobo sikhomba ezantsi kumanqanaba angama-50 abonisa ukuthengisa.
I-UNI / i-USD yeXesha eliPhakathi leTrend: Ukuthwala
Ukungaguquguquki kungumda ongena kwitshathi yeeyure ezi-4. Umfutho wokunyusa amandla awunakuqhubeka xa ufikelela kwinqanaba lokumelana ne- $ 30. Ibuyile yabuya kwakhona inqanaba lama- $ 25. Ukuzama kwenziwa okwesibini ukuvavanya inqanaba leedola ezingama-30 kodwa iibhere zongamela iinkunzi zeenkomo. Ixabiso liyancipha kwinqanaba lokuxhasa i-22.
Itshathi yeeyure ezi-4 ze-UNISWAP, nge-26 ka-Agasti
Ukungatshintshiswanga kuthengiswa ngezantsi kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA, ixesha lesalathiso samandla esi-14 sikumanqanaba angama-40 ukugoba ukubonisa uphawu lokuthengisa.